Meydadka shaqaalihii UN-ka ee la dilay oo laga dhoofiyey Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Meydadka shaqaalihii UN-ka ee la dilay oo laga dhoofiyey Gaalkacyo
8th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Gaalkacyo – Mareeg.com: Meydka labo shaqaale u kala dhashay Ingiriiska iyo Faransiiska oo shalay lagu dilay garoonka diyaaradaha Gaalkacyo ayaa maanta laga dhoofiyey halkaas, si loo gaarsiiyo dalalkooda.
Labada nin ee la dilay waxey u shaqeynayeen hay’adda UNODC ee Qaramada Midoobay u qaabilsan ka hortaga daroogada iyo damibyada, waxaana dilay askari ka tirsanaa ilaalada garoonka diyaaradaha.
Madaxwenaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland ayaa maanta kulan sagootis ah u sameeyay maydka laba sarkaal oo ka tirsanaa shaqaalaha hay’ada UNODC.
Madaxweynaha Puntland iyo wafdigiisa ayaa marka hore kulan xasaasi oo saxaafad dibad joog ay k ahayd la qaatay ku xigeenka wakiilka Soomaliya ee Qaramada midoobey Philippe Lazzarini iyo xubna sare oo ka socda laamaha hay’adaha Qaramada Midoobey waxaana kulankaas looga hadlayay qaabkii ay wax u dhaceen iyo sida ugu wanaagsan ee baaritaan dag dag loogu samayn karo dhacdadii ka dhacday magaalada Galkacyo.
Madaxweynaha Puntland iyo Saraakiisha UN-ka ayaa si wada jir ah uga qayb galay Sagootinta Maydka laba shaqaale loogu sameeyay gudaha garoona Gaalkacyo iyadoo ay ka soo qayb galeen dhamaan shaqaalaha Hay’adaha Qaramada midoobey ee ku sugan gobolka Mudug.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in dawlada Puntland iyo shacabkeedu ay la qayb sanayaan tiiraanyada iyo xanuunka dhamaan ehelada iyo shaqaalaha Qaramada midoobay waxaana uu ka balan qaaday in dhacdo noocan oo kale ah ysan dib danbe ugu dhici doonin guud ahaan Puntland.
Gaas ayaa sidoo kale sheegay in maamulka Puntland ay guddi heer sare ah u saartay baaritaanka dilka labadan shaqaale ee u kala dhashay dalalka UK iyo France.
Ku xigeenka wakiilka Qaramada Midoobey ee Somaliya Mr Philippe Lazzarini oo isna hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in dhacdo naxdin leh ay tahay dilka labada shaqaale ee ka tirsanaa Hay’ada UNODC waxaase uu tilmaamay in dhamaan Saraakiisha Qaramada Midoobey ay tacsi u dirayaan qoyskii iyo asxaabtii ay ka geeriyooden
Lama sheegin sababta sakariga ka tirsan ciidamada ku kalliftay inuu toogto raggaan shaqaalaha ee ee u shaqeynayey hay’adda Qaramada Midoobay hoostagta ee UNODC.
Protest against arrest of Somali refugees in Kenya set in Mogadishu